Ukuphelisa njani amabala ngokukhawuleza: Jonga indlela eyenziwe ngayo leBhlog
Oulusu lwakho lunemingxunya emincinci ebizwa ngokuba zii-pores ezivaliweyo ngeoyile, iintsholongwane, iiseli zesikhumba ezifileyo kunye nobumdaka. Xa oku kusenzeka rhoqo, ulusu luye luthande ukuqhekeka amabala. Ukuqhekeka kwamabala angalindelekanga yenye yezona meko ziqhelekileyo zolusu phaya. Indlela yokuphelisa ngokukhawuleza i-acne.
Kuxhomekeka kubungqwabalala, ukuqhawuka komtshato kunokubangela uxinzelelo ngokweemvakalelo, kuchaphazele ukuzithemba ngelixa ushiya amanxeba omzimba ixesha elingaphezulu. Iindaba ezimnandi kukuba kukho iindlela eziqinisekisiweyo zokucoca amabala kunye nokuphelisa ukuqhuma kwamabala amabala. Kwaye kwangoko uqala unyango unyusa umngcipheko wakho wokuba neenxeba. Indlela yokuphelisa ngokukhawuleza i-acne.
Nokuba uyaqhawula esihlathini sakho, i-chin, isifuba, okanye ebunzini, ezinye iindaba ezimnandi kukuba amabala asenokuba khona baphathwe ngaphandle kweekhemikhali ezinzima.
Ubuhle kunye nendlela yokuphila ye-blogger UDimma Umeh kutsha nje wabelane ngendlela acoce ngayo ulusu emva kokulwa ngoqhawulo-mtshato ngo-2019. UDimma, kwitshaneli yakhe ye-YouTube, wabelane ngenkqubo ye-skincare ehlaziyiweyo kunye nendlela awakwazi ngayo ukushenxisa ukophuka kwesikhumba okungalindelekanga. Ngokutsho kwakhe, usebenzise zonke iimveliso ze-organic ezingenazo iichemicals kodwa kufuneka unyamezelo kwisiphuphu kunye namabala amnyama ukuze iphele kancinci.
Uya kubona kwakhona i-vlogger yobuhle UTomi Adenuga wabelana ngekhaya kunye nonyango yendalo olusebenza ubusuku bonke ukucoca amabala kwaye ikunika ubuso obungenasiphoso obunqwenela.
Jonga indlela yokunyanga ukwaphuka kwesikhumba okungalindelekanga nguDimma Umeh…
Nge-oyile yesoda emnyama nesepha ye-aloe vera
Ngomgubo wesinamon kunye nobusi
Ifoto yeTyala: ividiyo yeYou | Ukuhlaziywa. Yapapashwa kuqala nge-5 kaMatshi ka-2020.
ukukhutshwa kwamagciwane ulusu olukhona ubuhle kunye nendlela yokuphila ye-vlogger isepha emnyama Ukuqhekeka UDimma Umeh Dimma Umeh skincare UDimma Umeh uhlaziye isiqhelo se skincare ukhathalelo lolusu indlela yokusebenza ukuqhekezwa kwamabala asebusweni vlogger Youtube